Faalloyinka – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Akhriso:- Xildhibaan Jawaari oo shacabka Fahamsiinaya sababta loo qaban la’yahay Doorasho qof iyo Cod ah.
Xildhibaan Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, ayaa fadhigii Baarlamaanka ee qabsoomay Sabtidii taariikhdu ahayd Desembar 7dii waxaa uu si qaanuuni ah u sharraxay, una lafoguray cutubka 1aad iyo 2aad ee sharciga doorashooyinka horyaalla Baarlamaanka, waxuuna dooddiisa […]
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu tahay deegaannada Galmudug ayaa waxaa ay soo dhaweeyeen Heshiiska Dowladda Federaalka iyo Ahlusunna ka gaareen dhismaha Maamulka Galmudug. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha […]
DHAGAYSO:- Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida oo saakay Xukuno ku risay Askar katirsan DFS oo lagu helay…
Maxkamada cidiamada qalabka sida ee qeybta 27-aad ayaa maanta waxaa ay xukun ku riday 6 eedeysane oo loo haytay dilkii Taliyihii qeyta Booliska gobolka hiiraan Marxuum Maxamed Macow Xalane. Gudoomiyaha Maxkamada cidamada ee qeybta 27-aad […]
AKHRISO:- Ahlusunna oo Aqbashada qodobadii kasoo baxay heshiiskii ay la gashay Dowladda Somalia.
Ahlusunna waljamaaca ayaa aqbashay in 20 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka Cusub ee Dowlad Goboleed Galmudug. War qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu cadeeyay in […]
Seddex Dal oo Afrikaan ah ayaa bilaabay in Ciidamadooda ay ka saaraan Somalia.
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa munaasibad sagootin ah u sameeyay Saraakiil Booliis ah oo ka socday Dalalka Ghana iyo Zambia. Saraakiishan oo ka mid ahaa qeybta tababarka Booliska AMISOM ee tababara Booliska Soomaaliya ayaa […]
Donald Yamamato oo ku wareeray Siyaasadda Somalia “Saacadaha soo socda ayuu is casili doonaa” Sababta ogoow.
Danjiraha Dalka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, ayaa qorsheynaya in uu iska casilo xilka danjiranimo ee Mareykanka uu uga hayo Soomaaliya. Wargeyska Foreign Policy ayaa daabacay warbixin dheer oo ka faallooneysa waxyaabaha ku gedaaman is […]